China Na-adọnye na ibudata robot HY-1010B-140 Manufacturer and Supplier | Yunhua
HY-1010B-140 Robot bụ robot na-ebudata ma na-ebutu ya, nke a na-ejikarị eme ihe maka nhazi nhazi na eriri igwe na-arụ ọrụ maka ịmị nri nri, nhazi n'etiti ihe eji arụ ọrụ, ngwa igwe na akụrụngwa ngwa ọrụ ntụgharị usoro ihe eji arụ ọrụ na ntụgharị ọrụ, lathe, egwe ọka, egweri, mkpọpu ala na ihe igwe ihe igwe ndị ọzọ na nhazi akpaka. Ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-ebudata ngwa ngwa na-ebudata ngwa ngwa site na nri nri na-ebufe, eriri ebu.
Industrial robot loading na ebutu nwere ike iji maka lathe nhazi, dị ka CNC lathe, machining center, Punch wdg O nwekwara ike-eji maka ihe onwunwe na-ewere, nri, na-anakọta na na. Na omume, akụrụngwa akụrụngwa na ibudata igwe nwere ike bụrụ ihe a na-ejikarị eme ihe na mmepụta ihe. Ọ nwere uru nke ọrụ dị mma, arụmọrụ dị elu na ọrụ dị elu.
Q1. Ọ bụ nke a maka ndị ọrụ?
O doro anya na, otu n'ime uru iji robot maka eburu na ebe bụ ichebe ndị ọrụ site na mmerụ ahụ. Otu onye ọrụ nwere ike ijikwa igwe 5 ~ 6 CNC.
Q2.What ụdị ngwaahịa nwere ike iji loading na ebutu robot?
A. Onye ọ bụla na-ebu igwe ọrụ robotic nwere ike ịkwado ya na ngwụcha ngwanrọ kwesịrị ekwesị nke dabara na igwe gị na ngwaahịa gị. Ha zuru oke nke ukwuu ma nwekwaa nsogbu iji jiri nlezianya jiri akụkụ ahụ.
Q3.Only otu njedebe nke ogwe aka ngwaọrụ nwere ike iji maka ibudata na ibudata robot?
A. Industrial robot ogwe aka nwere ike gbanwee ihe omume ahụ na gripper mwekota, mgbanwe ngwa ngwa na ndị nwere ọgụgụ isi nkwakọba, debugging ọsọ, iwepụ mkpa ndị ọrụ kamakwa maka oge ọzụzụ, nwere ike ngwa ngwa tinye n'ime mmepụta.
Q4. Enwere uru ọzọ nke ibugharị na ibutu robot?
A. Meziwanye ogo nke ọrụ a: igwe na-arụ ọrụ na-akpaghị aka, site na nri, nkedo, na-egbutu kpamkpam site na ígwè ọrụ na-arụ ọrụ iji belata njikọta nke etiti, a na-eme ka akụkụ dị mma ka mma, karịsịa nke mara mma.
Q5.Can ị na-enye azịza zuru oke maka ibudata na ibudata robot?
A. jide n'aka, anyị nwere ike ime ya na onye na-ere anyị.
Nke gara aga: Otu Axis rotator
Osote: TIG ịgbado ọkụ Robot